Azazela - Wikipedia
Ny anarana hoe Azazela dia teny hita ao amin'ny Tanakh (Baiboly hebreo) sy ao amin'ny soratra apokrifa sasany ilazana ny anjely potraka iray. Any amin'ny no andefasana osilahy hitondra ny fahotan'ny Jiosy mandritra ny fetin'ny Yom Kippur (hebreo: יוֹם כִּיפּוּר). Enti-manondro demony tamin'ny Andro Taloha tao amin'ireo Kananita fahizay izay ninoany fa mitoetra any an-tany efitra.
I Azazela, sary ao amin'ny Dictionnaire infernal nosoratan'i Collin de Plancy.
Ny teny hebreo hoe עֲזָאזֵל / Azazel dia midika hoe "Mampahery Andriamanitra", amin'ny fampiasana ny fototeny hoe azaz sy ny hoe El izay manondro an'Andriamanitra.
Araka ny loharano hafa dia avy amin'ny teny hoe azel izay midika hoe "misintona", "manaisotra" ny hoe azazel ka midika hoe "manaisotra manontolo". Ny Septoajinta, izay fandikana amin'ny teny grika ny Baiboly hebreo, dia miombon-kevitra amin'izany. I Gesenius ao amin'ny Fitsipiteny hebreo nosoratany dia mitovy hevitra amin'io koa. Ny raki-boambolana Strong anefa milaza fa "osilahy mapamita iraka" ny hoe azazel.
Ny anarana hoe Azazel dia fanovan'ny teny hebreo hoe Azael (hebreo: ) izay avy amin'ny fototeny hoe oz izay midika hoe "hery". Ampiasaina koa ny anarana hoe Rameel (hebreo: ) sy Gadriel (hebreo: ) hanondroana io demony io.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Azazela&oldid=970867"
Dernière modification le 20 Mey 2019, à 11:26
Voaova farany tamin'ny 20 Mey 2019 amin'ny 11:26 ity pejy ity.